Magaalada Baledweyne ee Gobolka Hiiraan waxaa hashiis ku kala saxiisday beelihii ku dagaalamay(Daawo Sawirada) – STAR FM SOMALIA
Magaalada Baledweyne ee Gobolka Hiiraan, shalay waxaa ka dhacay heshiis la kala dhex dhigay Odayaasha Dhaqanka labadii Maleeshiyo beeleed ee ku dagaalamaayay waayahan dambe Xaafada Howlwadaag ee Magaaladaasi.
Heshiiskaan oo ay garwadeen ka aheyd Dowladda Federalka Somaliya, ayaa waxaa la isugu keenay Odayaasha labada dhinac, waxaana lagu heshiiyay 6 Qodob oo labada dhinacba ay saxiixeen.
Wasiirka Amniga Gudaha C/risaaq Cumar Maxamed, ayaa sheegay Dowladda Federalka Somaliya inay dadaal ku bixisay heshiiskaan, islamarkaana Odayaasha Labada dhinac ay ku qanceyn waxa lagu heshiiyay.
Odayaasha Labada Dhinac ee Heshiiska saxiixay, ayaa madasha ka balan qaaday inay dhaqangelinayaan Heshiiskaan oo uusan soo noqon doonin dagaaladii ka dhacay Magaalada.
Ammaanka Xaafada Howlwadaag ee Magaalada Baledweyne ayaa waxaa gacanta ku haya ciidamada Xooga dalka Somaliya oo sugaya ammaanka.
ciidamada Nabad Suggida iyo kuwa Millateriga ayaa howlgal amaanka lagusugayo wada magaalada marka